U baahan tahay caawimo inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka My SD Card Micro?
1 caawi u baahan tahay inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka My SD Card Micro?
Hi oo dhan, waxaan haystaa SD Card Micro ah iyo sawirada qaar ka mid ah ayaan la tirtiro ka. Tani waxaa ka dhacay 1 year ago. Anigu waxaan ka yaabban weli suurtagal ii tahay inay dib u soo ceshano kuwa sawirada tirtiray ka card SD Micro? Walba oo soo jeedinaya in la aad u badan jeclaan lahaa.
Indeed, faylasha tirtiray aan run ahaantii si joogto ah la waayay ka kaarka SD Micro. Waxay kaliya noqon geli karin ka hor xogta cusub iyaga overwrites. Sidaas darteed, aan lagu salayn inta xogta ayaa la tirtiray ka kaarka SD Micro, aad suurto gal ah iyaga dib u soo ceshano karo ilaa iyo inta aad aan xogta cusubse waxaa lagu shubaa kaarka.
Waxaad samayn kartaa kaadhka SD Micro tirtiray kabashada sawiro la socdaan barnaamijyada soo kabashada xogta haddii aadan isticmaalo kaarka tan iyo xogta aad lumay. Wondershare Photo Recovery ama Wondershare Photo Recovery for Mac waa waxa aan jeclaan lahaa in aan ku talinaynaa in aad u. Barnaamijkan aad u saamaxaaya in ay dib u soo ceshano sawirada tirtiray ka card SD Micro fudayd. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay maamulaan barnaamijka iyo baarista card SD Micro, ka dibna ay doortaan sawirada tirtiray inuu ka soo kabsado.
Hel version tijaabo ah Wondershare Photo Recovery ka hoos ku qoran.
2 ka Micro SD Card Ladnaansho tirtiray Pictures ee 3 Talaabooyinka
Haddaba aan ka bilowno dib u soo kabashada la Wondershare Photo Recovery for Windows . User Mac samayn kartaa dib u soo kabashada ee talaabooyin la mid ah la Mac Version .
Tallaabada 1 Connect kaarka SD Micro la your computer iyo bandhigista Wondershare Photo Recovery. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in guji "Start" daaqada Premier si loo sii wado.
Fiiro Gaar ah: U hubso in aad kaarka SD Micro laga garan karo sida drive adag in your computer.
Tallaabada 2 In tallaabadaas, waxaad dooran doonaa kaarka SD Micro oo guji "Scan" inaad raadiso sawirada tirtiray.
Sida aan ka arki kartaa image hoose, dhammaan drives adag iyo aaladaha kaydinta dibadda ee your computer lagu soo bandhigi doonaa by Wondershare Photo Recovery. Haddii aadan ku arki kartaa mid ka mid ah si aad u card SD Micro, fadlan hubi xidhiidhka ka mid ah kaarka SD Micro si taxadar leh.
Tallaabada 3 scan ka dib, ka helay faylasha lagu soo bandhigi doonaa in qaybaha iyo waddooyinkiisa. Waxaad Kulanka Xiisaha Leh laga heli karaa sawiro si aad u hubiso in ay yihiin waxa aad rabto in aad dib u soo ceshano ama aan.
Markaas kaliya aad u baahan tahay ay doortaan sawirada aad rabto oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad u computer. Fadlan ha badbaadiyo dib u soo kabsaday in aad kaarka SD Micro ka dib markii dib u soo kabashada.
> Resource > Memory Card > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka Micro SD Card